आज जेठ ४ गते आइतबार पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी पढ्नुहोस् राशिफल, आज यी राशिलाइ अत्यन्त लाभ छ ! – Khabar Silo
आज जेठ ४ गते आइतबार पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी पढ्नुहोस् राशिफल, आज यी राशिलाइ अत्यन्त लाभ छ !
﻿आज २०७७ जेठ ४ गते आइतबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
आज २०७७ माघ २३ गते शुक्रबारको राशिफल
Posted on February 5, 2021 Author khabar silo
आज २०७७ माघ २३ गते शुक्रबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) पूरानो स्वास्थ्य समस्या बल्झिन सक्छ। […]
आज २०७७ जेठ १३ गते मंगलबारको राशिफल
Posted on May 26, 2020 Author khabar silo
आज २०७७ जेठ १३ गते मंगलबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ । धर्म तथा अध्यात्मतिर ध्यान जाने हुँनाले शरिरले […]
आज २०७७ साउन ६ गते मंगलबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ । धर्म तथा अध्यात्मतिर ध्यान जाने हुँनाले शरिरले […]
इटालीद्वारा यात्रा प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा, सिनेमा घर र उद्योग पनि खुल्ने
रौतहटका १० जना संक्रमित हालै भारतबाट आएका थिए